နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: Computer ကနေ Android device ထဲသို့ Applications တွေ အလွယ်တကူ Install ပြုလုပ်နည်း
Computer ကနေ Android device ထဲသို့ Applications တွေ အလွယ်တကူ Install ပြုလုပ်နည်း
အခု နည်းလမ်းလေးက မိမိ Android Phone , Tablet ထဲကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Game, Application တွေကို SD Card ထဲကနေ install လုပ်စရာမလိုပဲ ကွန်ပြူတာကနေ အလွယ်တကူ install လုပ်ပေးတဲ့ apps လေးပါ။
တချို့ Android Phone , Tablet မှာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Game, Application တွေကို SD Card ထဲကနေ install လုပ်နိူင်ဖို့ File Manager ( example : Astro File Manager, Root Explore ) မရှိတဲ့အခါ အခက်အခဲလေးတွေဖြစ်တက်ပါတယ်။
Android Market ကနေ File Manager တွေဖြစ်တဲ့ Astro File Manager , Root Explore စတဲ့ apk installer တွေရယူဖို့ကလဲ မိမိ Android Phone , Tablet မှာ Wifi or 3G ရှိဖို့လိုပါတယ်။
Android Market ၀င်မရတဲ့ နေရာမျိုးမှာလဲ File Manager ( example : Astro File Manager, Root Explore ) စတဲ့ apk installer တွေ သွင်းချင်သူတွေအတွက်လဲ အခုနည်းလမ်းလေးနဲ့ အသုံးပြုနိူင်ပါတယ်။
Android Application, Game တွေကို PC ကနေ အလွယ်တကူ Install ပြုလုပ်နည်း
1. မိမိ Computer မှာ အသုံးပြုမဲ့ Android Phone, Tablet ရဲ့ driver install ပြုလုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
2. Android Phone, Tablet driver install ပြုလုပ်ပြီးပါက
– Phone>>Setting>>Application>>Unknown sources ကို ” On ” ပေးပါ။
– ပြီးလျှင် Phone>>Setting>>Application>>Development>>USB debugging
ကို ထပ်ပြီး ” On ” ပေးပါ။
3. Android app installer v1.1 ကို download ဆွဲပါ။
4. Download ဆွဲထားသော Android app installer v1.1 ကို ဖြည်ပါ။
5. ဖြည်လို့ရလာသော Android app installer v1.1 Floder ( ဖိုဒါ ) ထဲမှာ
Drag and drop files here.bat ဖိုင်ကို ကလစ်၂ချက် နှိပ်ပါ။
6. Command box ကိုတွေ့ရပါမယ်။
ပြီးလျှင် မိမိ Android Phone, Tablet ထဲသို့ ထည့်ချင်တဲ့ Applications, Game .apk ဖိုင်ကို
Android app installer v1.1 Floder ( ဖိုဒါ ) ထဲသို့ ထည့်ပေးပါ။
7. Android app installer v1.1 Floder ( ဖိုဒါ ) ထဲမှ မိမိထည့်ထားသော
Applications, Game .apk ဖိုင်ကို Command box ထဲသို့ ဆွဲထည့်ပေးပါ။
ပြီးလျှင် Enter နှိပ်ပြီး ခဏစောင့်ပါ။
မိမိ Android Phone, Tablet ကိုကြည့်လိုက်ပါ မိမိ ထည့်ချင်တဲ့ Applications, Game .apk ဖိုင် install ပြုလုပ်ပြီးသွားပါပြီ။
Drag and drop files here.bat ဖိုင်ကို Right Click နှိပ်ပြီး Send to မှ
Desktop သို့ Shortcup ပြုလုပ်ပေးပါ။
6. Android app installer v1.1 ကို Desktop သို့ Shortcup ပြုလုပ်ပြီးပါက
မိမိ Android Phone, Tablet ထဲသို့ ထည့်ချင်တဲ့ Applications, Game .apk ဖိုင်ကို
Drag and drop files here.bat ဖိုင်ထဲသို့ ဆွဲထည့်ပေးပြီး ခဏစောင့်ပါ။
Android app installer v1.1အားရယူရန်(menius Link)
(Download Link ကိုနှိပ်ရာတွင် အောက်ပုံအတိုင်းပေါ်လာပါက Skip Ad ကိုနှိပ်ပြီး download လုပ်ပါ။)
Android app installer v1.1 အားရယူရန်(mediafire Link)
Android app installer v1.1 အားရယူရန်(Ziddu Link) မိမိကြိုက်နှစ်သက်လို့ လွယ်ကူမဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
မြန်မာ Mobile Application User များအသုံးဝင်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 8:10 PM